May 2016 - Myanmar News Plus
တစ်ခါတစ်လေ အမျိုးသမီးတွေဟာ ရေချိုးပြီးရင် အလျင်စလို အတွင်းခံဘောင်းဘီကို ဝတ်ဆင်တတ်ကြပါတယ်။ တကယ်တော့ ဒီလိုမျိုးဝတ်ဆင်ခြင်းဟာ အမျိုးသမီးတွေအတွက် အန္တာရာယ်ရှိပါတယ်။ FemCare ရဲ့ ဆေးပညာဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူ Jason James က “ရေချိုးပြီးတာနဲ့ အဝတ်အစားမဝတ်ခင်မှာ လိင်အင်္ဂါအပြင်ဘက်အပိုင်းကို ကိုယ်သုတ်ပဝါနဲ့ညင်သာစွာ သုတ်ပေးသင့်ပါတယ်”လို့ဆိုပါတယ်။ ဒီအချက်ဟာ အမျိုးသမီးတွေအတွက် အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်။ အကယ်၍ လိင်အင်္ဂါနားတစ်ဝိုက်မှာ စိုစွတ်နေတဲ့အတိုင်းအဝတ်အစား အလျင်စလိုဝတ်လိုက်မိရင် မှိုစွဲတဲ့ရောဂါဖြစ်လာဖို့ရာခိုင်နှုန်းများပါတယ်။ James က “အကယ်၍ သင်က ရေချိုးပြီးကာစမှာ အဝတ်အစားတွေကို ဝတ်ဆင်လိုက်ရင် စိုထိုင်းမှုကို ပိတ်လှောင်လိုက်သလိုဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ ဒီအချက်က ဘက်တီးရီးယားတွေကိုပိုမိုပေါက်ဖွားစေနုိုင်ပါတယ်။ မှိုစွဲတဲ့ရောဂါမျိုးတွေဖြစ်လာနုိုင်ပါတယ်”လို့ဆိုပါတယ်။ ဒီလိုမှိုစွဲတဲ့ရောဂါမျိုးကတော့ ဘယ်သူမှဖြစ်ချင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဖြစ်ဖူးသူများရဲ့အတွေ့အကြံအရ အတော်ဆိုးရွာကြောင်းလည်း Jamesကရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ အစိုဓာတ်နဲ့ အတွင်းခံပွတ်တိုက်မှုက ယားယံခြင်းက စတင်စေကာ pHပြောင်းလဲမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ ဒီလိုမဖြစ်ချင်ရင်တော့ လုပ်လို့ရတာ ၂ခုရှိပါတယ်။ […]
ပိုမိုပြည့်တင်းတဲ့ နှုတ်ခမ်းပုံစံမျိုး ရအောင် ဘယ်လိုပြင်ဆင်မလဲ
ကမ္ဘာကျော် မင်းသမီးအိန်ဂျလီနာ ဂျိုလီလို ပြည့်တင်းပြီး ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ နှုတ်ခမ်းမျိုး ဆေးတွေထိုး၊ ပုံသွင်းပြုပြင်နေမယ့်အစား အလွယ်တကူ သင်လုပ်ဆောင်နိုင်တာလေးတွေ ရှိနေပါတယ်။ မှန်ကန်တဲ့ အလှကုန်တွေကို ရွေးချယ်ပြီး နည်းမှန်လမ်းမှန် သုံးမယ်ဆိုရင် သင်လိုချင်တဲ့ နှုတ်ခမ်းပုံစံမျိုး ရမှာ အသေအချာပဲလေ။ ဒီတော့ မိတ်ကပ်နဲ့ အလှအပရေးရာ ပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Jennifer Trotter က ပြည့်တင်းပြီးလှပတဲ့ နှုတ်ခမ်းတစ်စုံရဖို့ ပြောပြထားတာက ၁။ မှန်ကန်တဲ့ နှုတ်ခမ်းနီအရောင်ကို ရွေးချယ်ပါ။ နှုတ်ခမ်းသား ပိုမိုပြည့်တင်းတဲ့ ပုံသဏ္ဍာန်မျိုးရဖို့အတွက်ဆို နှုတ်ခမ်းနီအရောင်ကို peachy pink၊ soft pink တွေလိုပန်းရောင် ရွေးချယ်တာ ကောင်းပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အသားရောင်ကလည်း အဆင်ပြေပါတယ်။ ၂။အရမ်းပြောင်လက်တာမျိုးတွေနဲ့ Matte လို ဟာမျိုးတွေ မဆိုးပါနဲ့။ ခရင်မ်နဲ့ Gloss […]
သုံးနည်းက အလွန် လွယ်ကူပါတယ်။ ဆီးဖြူသီးဟာ ဗီတာမင်စီ ကြွယ်ဝကာ အသည်းကို အားကောင်းစေပြီး အစာအိမ်တွင်းက အက်ဆစ်ရည်တွေကို ထိန်းညှိပေးပါတယ်။ ဆံပင်ကျန်းမာရေးအတွက်လည်း အထူးကောင်းမွန်တာ ဖြစ်ပြီး ခေါင်းလျှော်ရည်နဲ့ ဆံပင်ထုတ်ကုန် တော်တော်များများဟာ ဆီးဖြူသီး ပါဝင်ပါတယ်။ ဆံပင်ဖြူကို ကာကွယ်ဖို့ ဆီးဖြူသီးကို သုံးနည်းကတော့ လွယ်ကူပါတယ်။ ဆီးဖြူသီးအနည်းငယ်ကို အုန်းဆီထဲထည့်ပြီး ချက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အရောင်တွေ မဲသွားတဲ့ထိ ချက်ပေးရမှာ ဖြစ်ပြီး ရလာတဲ့အနှစ်ကို ဦးရေပြားတွေမှာ ပွတ်ထားပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နာရီအနည်းငယ်အကြာမှာ ရေဆေးချရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆီးဖြူသီးဖျော်ရည်ကိုလည်း သောက်ပေးသင့်ပါတယ်။ Photos & Source: Zee Newsduwun
ပုံပြောကောင်းရင် စော်ကြည်နိုင်ကြောင်း သုတေသန တစ်ခုက တွေ့ရှိ
လတ်တလော ပြုလုပ်ထားတဲ့ လေ့လာမှု တစ်ခုအရတော့ အမျိုးသမီး တွေ သဘောကျတတ်တဲ့ အမျိုးသား တစ်ယောက်ရဲ့  အရည်အချင်းမျိုးကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။ မြောက်ကယ်ရိုလိုင်းနား တက္ကသိုလ်က သုတေသီတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ John Donahue နဲ့ ထိုတက္ကသိုလ်မှာပဲ ပရော်ဖက်ဆာ တစ်ယောက်အဖြစ် ရပ်တည်နေတဲ့ Melanie Green တို့ဟာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာ ရှိတဲ့ ဘွဲ့မရသေးတဲ့ ကောလိပ်ကျောင်းသား ၃၈၈ ယောက်ကို သူတို့အတွက် ဆန့်ကျင်ဘက် လိင်အမျိုးအစား လက်တွဲဖော်တွေရဲ့  ဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးအရာတွေကို စစ်တမ်းကောက်ယူကြည့်ခဲ့ကြပါတယ်။ အဲဒီအခါမှာ ထွက်ပေါ်လာတဲ့ ရလဒ်ကတော့ ယောကျာင်္း လေးတွေအတွက်ရော မိန်းကလေးတွေအတွက်ပါ အားလုံးဟာ ကိုယ့်လက်တွဲဖော်ရဲ့  ဇာတ်လမ်းတစ်ခုကို ပြောပြနိုင်ခြင်း (သို့) ပုံပြင်ပြောတတ်ခြင်းတို့ဟာ ဆွဲဆောင်မှု အရှိဆုံး ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ […]
၀ိတ်ချရတာ လွယ်ပါတယ်။ အရင်က အချက်တွေ(၁၀)ချက်လောက်အထိ ရေးဖူးတော့ လူတွေက လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေက များလိုက်တာဆိုပြီး နှာခေါင်းရှုံ့ချင်ကြတယ်။ အခု အလွယ်နည်း (၅)ခုကို Shwemom က တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ (၁) အဓိကအစားအစာ5မျိုးပါပါစေ နေ့စဉ်စားတဲ့ အစားအစာထဲမှာ ကယ်လိုရီလောင်ကျွမ်းမှုကို မြင့်မားစေတဲ့ ပြောင်းဂျုံကဲ့သို့သော အစေ့အဆန်တွေ၊ ပရိုတိန်းဓာတ်ပါတဲ့ အစားအစာတွေ၊ သစ်သီးတွေ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေ၊ နို့နဲ့နို့ထွက်ပစ္စည်းတွေကို ပုံမှန်အစားအစာထဲမှာအနည်းဆုံး နှစ်မျိုးလောက်ပါအောင် စားပေးပါ။ အထူးသဖြင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေ ပါအောင် စားပေးပါ။ (၂) လေ့ကျင့်ခန်းပုံမှန်လုပ်ပါ အကောင်းဆုံးကတော့ မနက်အိပ်ယာထ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းပါဘဲ။ အချိန်အများကြီး ပေးစရာမလိုပါဘူး။ မိနစ်(၂၀)ဆိုလုံလောက်ပါပြီ။ နေ့တိုင်းလုပ်ဖို့တော့ လိုပါတယ်။ (၃) ဖိအားကင်းကင်းနဲ့နေပါ ဖိအားတွေဟာ ကောင်းကျိုးမပေးတဲ့ဟိုမုန်းတွေကို ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ အဲဒီအခါမှာ ကယ်လိုရီလောင်ကျွမ်းမှုနည်းပြီး ကိုလက်စထရောဓာတ် […]
ရာသီလာချိန် နာကျင်ကိုက်ခဲမှုဝေဒနာ သက်သာပျောက်ကင်းစေဖို့
ဟိုးအရင် ဆေးဆိုင်တွေ မရှိသေးတဲ့ အချိန်တုန်းက ဒီရှေးဟောင်းဆေးပညာဟာ မီးယပ်ပေါ်ချိန် နာကျင်ကိုက်ခဲမှု လျော့နည်းသက်သာစေခြင်းအတွက် တစ်ခုတည်းသော နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးလုံးတွေထက် နာကျင်ကိုက်ခဲမှု ပိုမိုကောင်းမွန် လျော့နည်းသက်သာစေမယ့် အထိရောက်ဆုံး ယင်းရှေးဟောင်းဆေးနည်းကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ရာသီလာချိန်နာကျင်ကိုက်ခဲမှု ကာကွယ်နည်းအတွက် လိုအပ်တာတွေကတော့ ကြက်ဆူဆီ၊ ရေနွေးအိတ် နဲ့ ချည်ထည်စတို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လုပ်ပုံလုပ်နည်း နောက်ကြောအောက်ဘက်ပိုင်း၊ အစာအိမ်နဲ့ သားအိမ်ရှိတဲ့နေရာပေါ်ကနေ ကြက်ဆူဆီ လိမ်းပေးပါ။ အရေပြား အဆီဝင်းနေအောင် လိမ်းပေးပါ။ ပက်လက်အိပ်ပြီး ခုနက ဆီလူးထားတဲ့နေရာမှာ ချည်ထည်စဖြင့် အုပ်ထားပြီး အပေါ်မှာ ရေနွေးအိတ်တင်ပြီး ၁၅ – ၂၀ မိနစ်ခန့် ထားပေးရပါမယ်။ ပြီးနောက် ရေနွေးအိတ်ဖယ်ပြီး ချည်စကို အဆီအားလုံး စုပ်ယူစေလိုက်ပါ။ ဒီလိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့် ရာသီမလာမီ ရောဂါလက္ခဏာ၊ ကြွက်တက်ခြင်းနဲ့ […]
သင်တို့နှစ်ယောက် မလိုက်ဖက်ဘူးဆိုတာ သိသာစေတဲ့ အချက်များ
သင်က စုံတွဲတစ်တွဲ လိုက်ဖက်မှုရှိမရှိကို ဇာတာတွေ ၊ဗေဒင်တွေနဲ့ တွက်ချက်ပြီး ကြည့်ရတာကို မယုံကြည်တတ်တဲ့ လက်တွေ့သမားတစ်ယောက်ဆိုရင် အခုဖော်ပြမယ့်အချက်တွေကို ကြည့်ပြီး သင်တို့စုံတွဲက လိုက်ဖက်ညီတဲ့ စုံတွဲ ဟုတ်မဟုတ် အဖြေထုတ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ဘယ်လောက်ကြာအောင် တွဲလာတဲ့ စုံတွဲဖြစ်ပါစေ လိုက်ဖက်ညီမှုမရှိရင် ပျော်ရွှင်မှုထက် စိတ်ပင်ပန်းမှုတွေကိုပဲ ရရှိနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သင်တို့နှစ်ယောက်လုံးရဲ့ သူငယ်ချင်းတွေက သင်တို့နှစ်ယောက်တွဲနေတာကို မထောက်ခံကြပါဘူး။ ကိုယ်နဲ့ ပုံစံတူ အကြိုက်တူတဲ့ သူငယ်ချင်းအသိုင်းအဝိုင်းထဲမှာ အတူရှိပေးဖို့ အဆင်သင့်မဖြစ်တဲ့ သင့်အဖော်က သင့်အတွက်လည်း လိုက်ဖက်တဲ့ လက်တွဲဖော်ကောင်းတစ်ယောက် အဖြစ်အမြဲရှိနေဖို့ ခက်ခဲမှာဖြစ်ပါတယ်။ သင်တို့နှစ်ယောက်တွဲပြီးနောက်ပိုင်း မိတ်ဆွေသစ်ထပ်မရဘူးဆိုတာကလည်း ပျော်ရွှင်တဲ့ စုံတွဲမဟုတ်ဘူးဆိုတာကို ပြပါတယ်။ ပျော်ရွှင်နေကြတဲ့ချစ်သူတွေက အတူတူ့ ဖြတ်သန်းချင်တဲ့ အချိန်တွေ၊ အကြောင်းအရာတွေများသလို ပွဲလမ်းသဘင်တွေ မိတ်ဆွေ အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ တွေ့ဆုံတာတွေအပြင် နှစ်ယောက်စလုံးနဲ့ […]
သိသာထင်ရှားတဲ့ အတောင်ပံသဏ္ဍာန် အိုင်းလိုင်နာ ဆွဲနည်း
အတောင်ပံပုံဏ္ဍာန် အိုင်းလိုင်နာ ခြယ်သနည်းဟာ လူတိုင်းနဲ့ လိုက်ဖက်ပြီး ရိုးရှင်းတဲ့ eyeliner ဆွဲနည်း တစ်မျိုးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆွဲရတာ လွယ်ကူပြီး အရည်၊ gels နဲ့ ခရင်မ် စသဖြင့် အမျိုးမျိုးရှိတာကြောင့် ကိုယ်ကြိုက်ရာ eyeliner fomula ကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ အဆင့် – ၁ Eyeliner ထဲ စုတ်တံနှစ်ပြီး မျက်တောင်လိုင်း အပေါ်တလျှောက် ညင်သာစွာ ဆွဲပြီး မျက်လုံးအပြင်ဘက်ထောင့်စွန်းလေးထိ ပုံမှာပြထားသလို ဆွဲသွားလိုက်ပါ။ အဲ့ဒီလို ဆွဲတဲ့အခါ ခုနဆွဲသွားတဲ့ ထောင့်စွန်းလေးဟာ အောက်ငိုက်မနေပဲ အပေါ်ကို ကော့သွားရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သိသာ နေစေဖို့အတွက် အပြင်ဘက်ကို ကော့ပြီး ဆွဲပေးပြီးတာနဲ့ အနားကွပ် ပိုချွန်ပေးရပါမယ်။ အဆင့် – ၂ နောက် […]
သူဌေးဖြစ်တဲ့ အမျိူးသမီးတွေရဲ့ တူညီတဲ့ စည်းကမ်း (၅) ချက်
သူဌေးဖြစ်ချင်တယ်ဆိုပြီး ဘုရားမှာ ဆုတောင်းနေရံနဲ့တော့ ဘာမှဖြစ်လာမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ နေ့စဉ်လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမဲ့ ကိစ္စလေးတွေကို မမေ့မလျှော့ပဲ လုပ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုရင် မအောင်မြင်စရာ အကြောင်း မရှိပါဘူး။ လိုက်နာရမဲ့ အဓိက အချက်လေးတွေ ကတော့ အောက်ပါအတိုင်းပါဘဲ…….. ၁. ကျန်းမာရေးသာလျှင် အဓိက နေ့စဉ်နေထိုင်မှု ဘဝမှာ ကျန်းမာရေးက အဓိက ကဏ္ဏမှာ ပါဝင်ပါတယ်။ ကျန်းမာမှသာလျှင်ကိုယ့်ရဲ့ ရည်မှန်းချက်ကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်မှာပါ။ ၂. အမြဲတမ်း ပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင် တက်တက်ကြွကြွ နေထိုင်နိုင်ခြင်း နေ့တိုင်းပိုက်ဆံမရှိဘူး ဆိုပြီးထိုင်ပြီးစိတ်ညစ်နေလို့ လဲဘာမှဖြစ်မလာပါဘူး။ ဒါကြောင့်စဉ်းစားနေတာထက် ပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်နေတက်မှ သာလျှင် လူချစ်လူခင်ပေါလာပြီး ကံကောင်းခြင်းနဲ့ အလုပ်လည်းအဆင်ပြေလာမှာပါ။ ၃. ဈေးအဝယ်တော်တာကလည်း သူဌေးဖြစ်မယ့် အမျိူးသမီးတွေ အတွက် မရှိမဖြစ်တဲ့ အချက် ပိုက်ဆံကိုချွေချွေတာတာနဲ့လိုအပ်တဲ့နေရာမှာလိုအပ်သလိုအသုံးချတက်တဲ့သူဟာ သူဌေးဖြစ်ကိုဖြစ်မှာပါ။ ၄. အမျိူးသမီးဖြစ်တဲ့အတွက် လှလှပပနေထိုင်ဖို့ဆိုတာဟာလဲ […]
ရုပ်ချောပေမဲ့ ရည်းစား မရနိုင်တဲ့ အကြောင်းအရင်း (၅) ခု
အချို့သော အမျိုးသားတွေအတွက် ဖူးစာဖက်ဟာ ရှာရခက်လှပါတယ်။ အချို့သော အမျိုးသားတွေဟာ အရွယ်ရောက်ရုံသာမက၊ အရွယ်လွန်တော့မယ့် အချိန်ထိရောက်အောင် တစ်ကြိမ်တစ်ခါမှ ရည်းစားမထားဖူးပဲ ဖြစ်ကြရလေ့ရှိပါတယ်။ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် အသက်အတော်ရချိန်ထိ ရည်းစားမရသူတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ရုပ်ရည်လည်း ပြေပြစ်ပေမဲ့ ရည်းစားမရနိုင်ဖြစ်ရတဲ့ အကြောင်းအရင်း (၅) ခုရှိပါတယ်။ ၁။ ရုပ်ရည်က အဓိကမဟုတ် ရုပ်ရည်ချောမောပြေပြစ်သူကို တွေ့လိုက်တဲ့ အခါ လူတိုင်းကြည့်မိတတ်ကြပါတယ်။ ဒါဟာ အမျိုးသားတွေမှာရော အမျိုးသမီးတွေမှာပါ ဖြစ်လေ့ရှိတာပါ။ ဒါပေမဲ့ အမျိုးသမီးတွေ အတွက်တော့ အဆုံးသတ်မှာ ရုပ်ရည်က အဓိက မဟုတ်တော့ပြန်ပါဘူး။ အမျိုးသမီး အများစုဟာ ချစ်သူရွေးချယ်ဖို့ စဉ်းစားရာမှာ ရုပ်ရည်တစ်ခုတည်း ကြည့်ပြီး ဆုံးဖြတ်လေ့ မရှိကြပါဘူး။ ၂။ ထူးထူးဆန်းဆန်း ဆွဲဆောင်မှုများ အချို့သော အမျိုးသားတွေက ရုပ်ရည်ချောမောတယ်လို့ ထင်ရပေမဲ့ […]